Kulan looga Hadlayay ka Hortagga Shaqaaqooyinka ka dhanka ah Haweenka oo ka dhacay Dhahar – Radio Daljir
Kulan looga Hadlayay ka Hortagga Shaqaaqooyinka ka dhanka ah Haweenka oo ka dhacay Dhahar
Diseembar 10, 2015 5:54 b 0
Somalia, December 10, 2015-(Daljir)_ Waxaa shalay lagu qabtay magaalada Dhahar ee xaruta gobolka Hayland munaasabad looga hadlayey 16ka Maalmood ee ka hortaga shaqaaqooyinka Haweenka. oo maalmahan kasocday meelo badan oo kamidn ah deegaanada Puntland.
Munaasabada waxaa ka qayb galay Masuuliyiin kasocday wasaaradda Haweenka,Maamulka degmada iyo Haweenka magaalada intay munaasabadu socdotay waxaa laga wada hadlay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka loogaysto Haweenka.
Haweenka Magaalada ayaa codsaday in siwadajir loo soo afjaro tacadiyadaha kala duwan ee loogaysto waxayan Wasaaradda ugu baaqeen in wacyi galinta looga hortagayo shaqaaqooyinka la joogteeyo.
Masuuliyiinta ka socday wasaaradda ayaa u sheegay Odayaasha iyo dhalainyarada in la joojiyo dhibaatooyinka haweenka loogaysto islamarkaana ay noqdaan dumarku kuwa la qaybsada raga howlaha kale,iyagoo sheegay wasaaraddun ay da daal badan ku bixin doonto sidii loosoo afjari lahaa dhibaatooyinka Haweenka loo gaysto.
Puntland oo Somaliland uga Digtay Shidaal-baarista Sool